गर्मीमा पानी पिउनाले कयौ फाइदा, कति पिउने पानी ? के के छ फाइदा ? | Cyprus-Nepal.com
मानवीय जीवनमा सायद पानीको जस्तो महत्त्व अरू कुनै कुराको छैन होला ? किनकि पानी मात्र एउटा यस्तो चिज हो जसको आधारमा मानिस जीवित रहेको छ ।
मानिस दिनभरि खानेकुरा नखाई बस्न सक्छ तर पानी नपिई बस्न भने गारो नै हुन्छ l अहिलेको गर्मी मौसममा मानिसहरू तातो पानी भन्दा चिसो र सफा पानी पिउन रुचाउँछन् । त्यसका लागी फिल्टर र फ्रिजको प्रयोग गरिरहेको पाइन्छ । तर फ्रीजमा राखिएको पानी पिउनाले जोर्नीको समस्याका साथै बढी चिसो पानी पिउने हुँदा घाँटी दुख्ने समस्या पनि हुने गर्दछ ।
पानी चिसो होस् र कुनै प्रकारको समस्या देखा नपर्नु..का लागि माटोको भाँडोमा राखिएको पानी पिउनु उपयुक्त हुन्छ । माटोको भाँडोमा राखिएको पानी चिसो हुनुका साथ साथै स्वास्थ्यलाई पनि फाइदाजनक हुने गर्दछ ।
पानी मानिसको शरीरका लागि जरुरी तत्व हो । शरीरको ७० प्रतिशत भाग नै पानीबाट बनेको हुन्छ । यो कमी भयो भने शरीरबाट विषाक्त पदार्थहरु बाहिर निस्कन पाउँदैंन । यसका अलावा शरीरका लागि जरुरी अक्सिजन पनि प्राप्त हुँदैंन । यसैले गर्मी होस् या चिसो, हरेक मौसममा पर्याप्त पानी पिउनु पर्छ ।
गर्मीको समयमा शरीरमा पानीको कमी हुने समस्या भइरहन्छ । गर्मीमा शरीरको तापमान नियन्त्रित गर्न पसिनाबाट प्रशस्त पानी बाहिर निस्कन्छ । यसैले यो मौसममा पानी अझ बढी आवश्यक हुन्छ । पानीको कमीका कारण मिर्गौलाको समस्या निम्तने सम्भावना हुन्छ । सबैभन्दा बढी समस्याचाहिँ ‘डिहाइड्रेशन’ नै हो ।
पानी खाना खानु आधा घण्टा अघि या खाना खाएको आधा घण्टापछि पिउनुपर्छ । गर्मीबाट आउनेबित्तिकै पानी पिउँनुहुन्न, केहीबेर आराम गरेपछिमात्र पिउन सकिन्छ । यदि छाति पोल्ने या कब्जियतको समस्या छ भने पानीमा एक चम्चा कागतीको रस मिसाएर पिउन सकिन्छ । खाना खाएलगत्तै पानी पिउनुहुन्न, यसले खाना पचाउन समस्या हुन्छ ।
विभिन्न फलफूल तथा तरकारीलाई पनि पानीको विकल्पको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । काँक्रोमा शरीरका लागि जरुरी भिटामिन र खनिज पदार्थका अलावा पानीको मात्रा पनि अधिक हुन्छ । यसमा ९६ प्रतिशतभन्दा बढी पानी हुन्छ ।
जसको उपयोगले शरीर हाइड्रेट रहन्छ । यस्तै, पालुंगोमा पनि ९१ प्रतिशत पानी हुन्छ । पालुंगोमा आइरन र म्याग्नेसियमको मात्रा प्रचुर हुन्छ, जसले शरीरमा हेमोग्लोबिनको मात्रा बढाउँछ । स्टार फ्रुटमा पानी करिब ९१ प्रतिशत हुन्छ । स्वादमा अलिक अमिलो हुने यो फलका एन्टीअक्सिडेन्ट र भिटामिन सी प्रमुख रुपमा पाइन्छ ।